အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: ကြောက်စရာ့ အဆိုအမိန့်
အကြောင်းအရာ ။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ စာသားများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါရန်ကိစ္စ
လည်ကုပ်များကို ခုတ်ဖြတ်ကြလေကုန် (( အောက်ပါ ကျမ်းစာ သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင် ပါမပါ သိလိုပါလျှင် သို့တည်းမဟုတ် ကျွန်ုပ်အား ယုံကြည်မှုမရှိပါလျှင် လေ့လာနိုင်ပါရန် အာရဗီနှင့် မြန်မာ တွဲလျှက်ပါရှိသော ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် စာမျက်နှာ ၁၁၃၀ ပါ PDF ဖိုင် ၁၂ မက်ဂါဘိုက် ကို အခမဲ့တောင်းယူနိုင်ပါရန် အီးမေးလိပ်စာကို ကွန်မန့်ဘောက်တွင်ရိုက်ပါ )
ကုရ်အာန်ကျမ်း စာမျက်နှာ ၉၀၆ ( စူရာ ၄၇ / စူရဟ်မူဟမ္မဒ်) မှာ အောက်ပါအတိုင်း အတိအကျ ပါကြောင်း အာမခံပါသည် စာဖတ်သူများ ကြိုက်သလို ဆုံးဖြတ်တော်မူကြပါ ။
၄၇း၎ ။ ယခုသော် အသင်တို့သည် “ကာဖိရ်”သွေဖည်ငြင်းပယ်သောသူတို့နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြသော အခါ လည်ကုပ်များကို ခုတ်ဖြတ်ကြလေကုန် ။ နောက်ဆုံးတွင် အသင်တို့သည် ၄င်းတို့အား ကောင်းစွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးသောအခါ သုံ့ပန်းများကို ကြိုးများဖြင့် ကောင်းစွာတုပ်နှောင်ကြလေကုန် ။ ထို့နောက်တဖန် ( အသင်တို့သည် )ကျေးဇူးပြုခြင်းအားဖြင့် (လျော်ကြေးမယူဘဲ ပြန်လွှတ်ခြင်းကို) သော်လည်းကောင်း၊လျော်ကြေးယူ၍(ပြန်လွှတ်)ခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊(ပြုနိုင်ခွင့်ရှိ၏) စစ်မက် တိုက် ခိုက်မှု သည် လက်နက်ချသည့် တိုင်အောင် ( ၄င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ အမိန့်တော်သည် ) ဤအတိုင်းဖြစ်၏ ။ စင်စစ်သော်ကား အကယ်၍သာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အလိုရှိတော်မူပါလျှင် ( စစ်မက်တိုက်ခိုက်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းပြုတော်မမူဘဲ ကိုယ်တော်တိုင်) ၄င်းတို့အား လက်စားချေအပြစ်ပေးတော်မူခဲ့မည်သာ ။
သို့ရာတွင် ထိုအရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အနက် အချို့ကို အချို့ဖြင့် စမ်းသပ်တော်မူအံ့သောငှာ ( စစ်တိုက်ရန်အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်တော်မူခဲ့၏။ ) အမှန်သော်ကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်းတော် (နှိုက်)တွင်သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ကြရသော သူတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထိုအရှင်မြတ်သည် အလျှင်းအချည်းအနှီး ဖြစ်စေတော်မူမည်မဟုတ် ။
45Like · ·
Nyi Nyi Mg, Thet Tun and 53 others like this.
တမ္ပဝတီ သား ကြိုက်တယ်ဗျာ ....ဒီလိုပြောရဲတဲ့ လူ က တော်တော့်ကို ရှားပါတယ်
Sunday at 9:36am via mobile · Like · 6
မျက် သွယ် လေးစားတယ် တကယ်..........
Sunday at 9:49am · Like · 3
Myothu Ya ကုလါးမြအေးသိလိမ့်ကိုနေမေးထားတာကို
Sunday at 10:03am via mobile · Like · 1
Myat Than Htike အစ်ကိုရေ ဖတ်ချင်လို့ရှာနေတာကြာပါပြီ။ အစ်ကို့ဆီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ် ကျေးဇူးပြု၍ပို့ပေးပါဦး အစ်ကို။ anatta124@gmail.com ပါ။
Sunday at 12:18pm via mobile · Like · 2
ရန် မျိုးအောင် yanemailbox@yahoo.com
Sunday at 1:33pm via mobile · Like · 2
Tharkyar Mgmgုခုချိန်မှာ ကိုနေမျိူးဝေ နဲ့ ကိုနေမျိူးဇင် လေးစာနေမိတယ် မှန်တာကို မှန်မှန်း သိတယ် ဦးဆောင်နိုင်ကြပါစေနာ် ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုနေဇင်လည်း ပါတီထောင်ပြီး နုိုင်းင်္ငရေးလုပ်ဖို့ သင့်တယ်
Sunday at 1:49pm · Like · 2
Zaw Latt aungzawzawlatt09@gmail.com
Sunday at 4:16pm via mobile · Like
Sun Lin မိတ်ဆွေကြီးကို ထောက်ခံအားပေးပါတယ်။ဂုဏ်လည်းယူမိပါတယ်ဗျာ
Sunday at 6:42pm via mobile · Like · 3
Thetminn Oo ကိုကြီး ကျွန်တော်ကိုလဲ ပို့ပေးပါလား thet5556789@gmail.com လေ့လာချင်လို့ပါ . . . အခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Sunday at 8:19pm via mobile · Like · 1
Myat Than Htike ရပြီ အစ်ကိုကြီးရေး ။ကဲဖတ်ချင်တဲ. အစ်ကိုတွေ ဒေါင်းလို.ရပြီ http://www.mediafire.com/view/?rpckv8a664ch64a
MediaFire isasimple to use free service for that lets you put all your photos,...See More
Sunday at 11:13pm · Like · 2
MinThit Sar ဟုတ်ကဲ့ U N နဲ့ Europe နိုင်ငံတွေကိုလည်းပို့ ပေးပါဦး ။ ကျနော် save လုပ်ထားတာလေးလဲပြန် share ပေးလိုက်ပါတယ်။
လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကုရ်အာန် တစ်အုပ်လုံးကိုလေ့လာပါ။နဲနဲသိတာထက်များများသိတာပိုကောင်းပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်a little knowledge is very dangerous. ကိုအောင်မြင့်မင်း၀၉ ၄၃၃ ၉၉၉ ၃၃
Chit Chit Lay လူသတ်ပါလို့ပေါ်တင်ကြီးရေးထားတာကိုတောင် ဖင်ပိတ်ပီးငြင်း ချင်သေးတယ်။ ကုလားများမျက်နှာပြောင်ချ က်ကတော့ မပြောချင်တော့ဘူး။
Like ·3· 1 hour ago
နန္ဒ ထွန်း သူသေသေချာချာလေ့လာနေတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ် ကို@Aung Myint Min .
Aung Myint Min လူသတ်ပါလို့ဘာလို့ပြောတယ်ဆိုတာ လေ့လာသင့်ပါတယ်။အခုမိထ္တီလာမှာ လူသတ်မီးရှို့လုယက်နေတဲ့လူတွေကကော ဘယ်သူတွေကခိုင်းနေလို့လဲ။
Ko Tun Htike ပြောပြော ဂျပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် ဖင်ပိတ်ပြီးပြော
Aung Myint Min အကိုဘာမှမပြောရသေးပါဘူး လေ့လာမယ်ဆိုရင်အစအဆုံးလေ့လာစေချင်တာပါ။မှန်ကန်စွာသိမြင်ချင်း မှန်ကန်စွာတွေးတောခြင်း မှန်ကန်စွာကြံစီ အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့statement တွေဟာ မဂ္ဂသစ္စာလို့ေါ်တဲ့ မဂ္ဂင်၈ ပါးထဲက စိတ်ချရတဲ့ ကျင့်စဉ်တွေပါ။ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုမှန်ကန်ကန်စွာ တွေးမြင်/ကြံစီအားထုတ် /သိမြင်နိုင်စေရန် ခရီးသွားဖေါ်အချင်းချင်း သတိပေးစကားပြေပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
Edited · Like · Edit · 38 minutes a
Yesterday at 2:24am via mobile · Like
ရှင် သန် သူ ကုလားအကြောင်းသိရလိုဝမ်းသာတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Yesterday at 10:16am via mobile · Like · 1
Htethtet Wai မွတ်တွေက သူတို့ဘာသာအ ကြောင်းကိုဗမာတွေသိစေချင်တာ ဗမာတွေအခုလိုဖြစ်နေတာကို သိကြရင်ဝမ်းသာကြလိမ့်မယ်။ မွတ်..မကောင်းကြောင်တွေရေး.. ဖော်ထုတ်နေရတာနဲ့အချိန်တွေ ကုန်..သူတို့ဘာသာကိုဖြန့်ဖြူးပေး နေသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့မေတ္တာတရားကိုမွတ်တွေသိအောင်လိမ္မာပါးနပ် စွာကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
Nay MyoThant like ကိုနေမျိုးဝေ
Min Pye Sone minpyesone@gmail.com
Htway Ko Ko Winn ရှင်းရှင်းလေးကိုရူပ်နေကြတယ်အကိုတို့ ရာ စစ်မက်တိုက်ခိုက်မူသည်လက်နက်ချသည့်တိုင်အောင် ငှင်းတို့ နင့်ပတ်သတ်သည့်အမိန့် တော်သည် ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်ဧ။်တဲ့ စစ်ပွဲတစ်ပွဲအတွက် ဥပဒေပြထန်းထားတာပါ ။ ရန်သူ့ ဘက်က လက်နက်မချမချင်း ရန်သူ ကို ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတာ သင်...See More
Aung Hein ယခုသော် အသင်တို့သည် “ကာဖိရ်”သွေဖည်ငြင်းပယ်သောသူတို့နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြသော အခါ လည်ကုပ်များကို ခုတ်ဖြတ်ကြလေကုန် ။ နောက်ဆုံးတွင် အသင်တို့သည် ၄င်းတို့အား ကောင်းစွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးသောအခါ သုံ့ပန်းများကို ကြိုးများဖြင့် ကောင်းစွာတုပ်နှောင်ကြလေကုန် ။ အထက်ပါ အဓိပါယ် ကို သေချာစွာ ရှင်းလင်းကြပါလေ. ။ အမှန်တရား ကို ရင်ဆိုင်ကြပါ။ ကိုနေမျိုးဝေ ပြောသည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ တပါးသော ဘာသာဝင်များကို ရန်ပြု ရန် ညွှန်ကြား ထားချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူတစ်ပါး ဘာသာဝင်များ ကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန် ညွှန်ကြားထားသော ကျမ်းစာ သည် ကိုးကွယ်ထိုက်သည် ဟု ယုံကြည်ကြပါလျှင် ဆက်လက်ကိုးကွယ်ကြပါ်။ သို့သော် တပါးသူများသည် လည်းမိမိတို့၏ အသက်ကို အသက်စွန့် ကာကွယ်ကြမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Htway Ko Ko Winn အကို ကာဖိရ် သွေဖယ်ငြ်းဆန်တယ်ဆိုတာ ဘာသာသာသနာကိုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ မိဘစကားကို သားသမီးကနားမ ထောင် လျင် လည်း သွေဖည်ငြင်းဆန်သူ ကာဖိရ် လို့ သုံးပါတယ် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ပါ အကိုပြောသလိုပေါ့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာ ကျွန်တော်လုပ်မယ်အကို ။ အကိုလည်းကိုယ်ယုံကြည် ရာလုပ်ပါ။ သေချာတာက တော့ ကျွန်တော့ ယုံကြည် ရာကြောင့် တစ်ပါးလူဘယ်တော့မှမထိခိုက်ဖူးဆိုတာပဲ အကို။
Aung Hein ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကို ကိုးကွယ်လို့ သူတစ်ပါး မထိခိုက်စေရဘူးဆိုတဲ့ စကားကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ကျမ်းမှာ တော့ သူတစ်ပါး ထိခိုက်အောင် ညွှန်ကြားထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၉၀၆ ၊ ၄၇း၎ မှာ အတိအကျပါ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အလွန် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ပါ။ သူတစ်ပါး ရဲ့ အသက်ကို ထိခိုက် အောင် ညွှန်ကြားချက်မျိုး တစ်ခြား ဘာသာဝင်တွေမှာ မတွေ့ရပါ။ တကယ့် လက်တွေ့ မှာ လည်း ဘာသာမတူသူ ကို ကို အသက်သေတဲ့ အထိ တိုက်ခိုက်နေကြတာ နေရာအနှံ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ရခိုင် မှာ မိတ္တိလာမှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ က သက်သေခံနေကြပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ကာလည်း အတူတူဖြစ်နေပါတယ်။ သို့သော်
Nay is now friends with Ashin Dayweinda and9other people.
Aung Hein sharedalink.
MAKE MONEY: ကြောက်စရာ့ အဆိုအမိန့်
3 hours ago near Yangon
လူထုမောင်ကာဠု ဆိုတာ ငါမဟုတ်ဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ဒင်းကို တရားစွဲဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူး ခွေးသူတောင်းစားလို့တော့ ဆဲလိုက်မယ်။
Ko Phyu, ကို ကံ ကြီး, နန္ဒ ထွန်း and 43 others like this.
Smin Oo အပေါ်က ဘုန်းကြီး အကောင့်တု သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးအစစ်မဟုတ်ပါ။ လိမ်လည် လှည့်ဖျားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Smin Oo မြတ်စွာ ဘုရားသည် ထိုကဲ့ သို့ လိမ်လည်လှည့်ဖြား မုသားကို ရှောင်ကြဉ်ခိုင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော မုသားပြောသော သူသည် မုဒိန်းမှု လူသတ်မှုစသော မည်သည့် အပြစ်ကို မဆို ကျုးလွန်ရဲသော လူဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တည်း
Phothu Taw အဲဒါမျိုးမှ ကြိုက်တာ
Myanmar Top Faceb00ker
IMNA Mon News Burmese Version
လူထု မောင်ကာဠုဆိုတာ နေမျိုးဝေ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ငါမတိုင်ဘူး နဲနဲတော့ဆဲလိုက်မယ် မအေပေး ကောင် လဒကောင် ဒါလောက်ဆို ငါကြေပြီ မဘလော့သေးဘူးဒင်းကို
နေမျိုးဝေဘက် မျှားဦးတွေလှည့်ပြီလို့ နန္ဒထွန်းကပြောနေတယ် ။ ဘာမှမဖြစ်ဘူး သနူးတယ်
ဒဲ့ရေးတယ် ။ တွတ်မရေးဘူး ။ တာဝန်ယူတယ် ။
Shwe Min Won, Nyi Nyi Mg, နန္ဒ ထွန်း and 30 others like this.
Nay Wai စိတ်မဆိုးပါဘူး ငါ့ တော်ကီကြီးက ပုံမှန်ပါ
Thanlin Lin ကိုနေမျိုးဝေခင်ဗျ add ထားပါတယ်။နန္ဒထွန်း မိတ်ဆွေပါ..လက်ခံမယ်ယုံကြည်ပါတယ်..။
နန္ဒ ထွန်း တိန်
12 hours ago near Yangon
ကျွန်ုပ်နေမျိုးဝေ ရေးသမျှ ပို့စ်များကို ဤ ဝေါမှလွဲ၍ အခြားစာမျက်နှာများတွင် တဂ်မလုပ်ပါ ။
မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် မိမိတို့ဘာသာ ရှယ်ယာလုပ်ခြင်း ကော်ပီပေ့စ်လုပ်ခြင်းပြုနိုင်ပါသည် ။
ကို ကံ ကြီး, နန္ဒ ထွန်း, Win Naung Oo and 39 others like this.
Nyan Htet thz bro
Min San်ကျေးဇူးပါပဲအစ်ကို၊တစ်ချို့ငကြောင်တွေက သူတို့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကို တွန့်တိုတက်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကစကားလုံးဆိုတာ ခိုးချသူအတွက် အသက်မပါပါဘူး။
Nay Wai sharedastatus.
ငါတင်တဲ့ကျမ်းတွေကို သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ အာရပ်တွေရဲ့ကျမ်းတွေလို့ပြောနေတယ် ။ ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ် မင်းတို့ထဲမှာမပါရင်ကောင်းတာပေါ့ အဲဒါကိုထုတ်ပြောရင် အဆင်ပြေပြီလို့ပြောလိုက်တာ မရဘူးကမ်းတက်နေလို့ ဆဲလွှတ်လိုက်တယ် ရဲတိုင်မယ်ပြောလို့
Shwe Min Won, Aung Myo, Aung Than Tun and 59 others like this.
မိုး သိမ်း https://www.facebook.com/moe.theim/posts/296997977097050 ကိုဖတ်ပေးပါ ကိုနေမျိုးဝေ။ခင်ဗျားကို tag ပေမဲ့ ပါမလာဘူးဗျ။ဟိုနေ့က ပြောလက်စ ပိုစ်ကလည်းအောက်ရောက်နေတော့ ရှာမရလို့။ပိုစ်က ရှည်နေတော့ ကွန်မန့်မှာလည်းအဆင်မပြေတာနဲ့ စတေတပ် မှာပဲတင်လိုက်ပါတယ်။
Wai Phyo ဟားဟားဟား ကြိုက်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီ စကားလုံးတွေကို……®
Nay Myo Thurein သတ္တိ ကိုတော့လေးစားသွားပြီး ။ အချက်ကျကျ ထောက်ပြတာ ဘယ်မွတ်စ် ကို မှ ဂ ရုစိုက်စရာ မလိုဘူး ။ မကြေနပ်ရင် ဘောင်ထဲ ကနေရှင်း ။
Aung Si Thu Bravooooooooo !
ငါတင်တဲ့ကျမ်းတွေကို သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ အာရပ်တွေရဲ့ကျမ်းတွေလို့ပြောနေတယ် ။ ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ် မင်းတို့ထဲမှာမပါရင်ကောင်းတာပေါ့ အဲဒါကိုထုတ်ပြောရင် အဆင်ပြေပြီလို့ပြောလိုက်တာ မရဘူးကမ်းတက်နေလို့
09422557823 တယ်လီဖုန်းနှင့် နှောက်ယှက်နေပါသည် ဆဲလွှတ်လိုက်သည် ။
နန္ဒ ထွန်း, Win Naung Oo, Mg Mg Tin and 27 others like this.
Blackmagıc Chef phar tal ma lay ae kg ka. ka bar ko phat mae kg
Yesterday near Yangon
Thet Tun, Ma Su Mon, နန္ဒ ထွန်း and 24 others like this.
တမ္ပဝတီ သား ခရစ်ယန်တွေလို မူစလင်တွေကလည်း ကိုယ့် ဘာသာကောင်းကြောင်း ငြိမ်းချမ်းကြောင်း အာမခံရင် ကျမ်းစာ ကို palm flat ၇ိုက်ပြီး ဝေ ပါ့ လား ။ သတ္တိတော့ မရှိဘဲ နဲ့။ အာရပ် ကုန်ရန် လို့ ပြောပေမဲ့မတူဘူး သတ်တာတွေ ဖြတ်တာတွေ မပါဘူး လို့ မပြောရဲဘူး ။ သူတို့ ချင်းချင်း လည် အရင် လှီးခံရမှာ ကြောက်လို့ ။ ဗုဒ္ဒဘာသာက မဟာယန နဲ့ထေရဝါဒ ကွဲပြားတာကို တရားဝင်ပြောရဲတယ်
Yesterday at 5:47pm · Edited · Like · 4
Kyaw Kaung မှန်တယ်။ ကို တမ္ပဝတီသား။ ကမ္ဘာမှာ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာတော့ ဆွန်နီဗလီကို ရှီးယိုက်က အသေခံဗုံးခွ။ ရှီးယိုက်ဗလီကိုလည်း ဆွန်နီမွတ်ဆလင်က ပြန်ဗုံးခွဲ။ ဒါနဲ့ပဲလည်နေတယ်။ ထေရဝါဒ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မဟာယန ကမီးလည်းမရှို့ခဲ့သလို မဟာယနဘုန်းကြီးကိုလည်း ထေရဝါဒတွေက မသာပေါ်...See More
Yesterday at 6:10pm via mobile · Like · 5
Kyaw Kaung မယုံကြည်လို့သတ်ပစ်တယ် ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။
Yesterday at 6:12pm via mobile · Like · 1
Toung Chay ဥပဒေ မှာ လူသတ်ရန်ကြံစည်မှု့ ရည်၇ွှယ်ချက် ရှိရှိ လုပ်နေတယ်လို့ စစ်ဆေးတွေရှိလျင် ပိုပြီးအပြစ်ကြီးတယ်. မြန်မာ့ ဥပဒေ......ဒါကြောင့် ကိုနေမျိုးဝေရဲ လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံပါတယ်....မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မြန်မာ့ဥပဒေအောက်မှာ တပြေးညီရပ်တည်သင့်ပါတယ်...
Thet Tun, နန္ဒ ထွန်း, Mg Mg Tin and 28 others like this.
Ngwe Tun လီးကုလား တိုင်လေကွာ
Maung Maung Myint Bravo . အဲဒါမြန်မာ့သတ္တိ။ အမှန်တရားအတွက်အသက်ကိုစွန့် ဝံ့သူတွေပြောတဲ့စကားဘဲ။ ဘယ်ကောင်တိုင်ချင်လဲတိုင်လိုက်လေ။ ဦးနေမျိုးဝေလေးစားပါတယ်။
Yesterday at 5:55pm via mobile · Like · 4
Smin Oo Bravo
Yesterday at 6:26pm via mobile · Like
Aung Ko Ko Htet ဟား မိုက်တယ်ကွာ ။ အဲသလိုကု ဒဲ့ကစ် ရတယ် ။ like 100000000000000000
Yesterday at 6:40pm via mobile · Like · 2
တော်ရုံလူတွေက မတွေးမိဘူး - - - ကလေးမှာ ဆရာတော်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြတော့ အားလုံးးအံ့အားသင့်ကုန်တယ် ။
ကျမ်းဂန်စာရွက်ကို မျက်မြင်ထုတ်မပြနိုင်ရင် ယုံဘို့တောင်ခက်သတဲ့
မြင်သမျှလူ သြချကုန်တယ် ။ အရမ်းကို သတိထားမိသွားတယ်
Naung Taw Lay, Min Aung Khine, Shwe Min Won and 55 others like this.
Hein Minn ကုန်အန်ကျမ်းလို ချင် တဲ့သူ google play storeမှာ holy quran burmese ရိုက်ပြီးရှာပါ
Yesterday at 6:31pm via mobile · Like · 7
Fifth Role Google play ကနေ download လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ကျေးဇူးပါ။ ဘာတွေ ရေးထားသလဲ လေ့လာကြည့်လိုက်ဦးမယ်။မဟုတ်တာတွေ့လို့ကတော့ ဖွပြီသာမှတ်တော.
Smin Oo ဆက်လုပ်ပါ
Kyaw Thura အားလုံး အပျင်းပြေ ဖတ်ဖို့ပါ။ http://islamvirus.blogspot.com/
islam virus blog အစ္စလာမ် မွတ်ဆလင် ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ Demographic Islamization
Nay Wai shared ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့'s photo.
မိုးသီးဇွန်ကြီးအတွက် လူ့အခွင့်အရေး စာတမ်း
ကုရ်အာန် စာမျက် နှာ ၉၆ ပါ
၃း၁၂ ။ ( အိုနဗီတမန်တော် )အသင်သည် (ယင်း) မယုံမကြည်သွေဖည်ငြင်းပယ်ကြကုန်သော ကာဖိရ်တို့ကို ပြောကြားပါလေ။ “ မကြာမီအတွင်း အသင်တို့သည် (ဤပစ္စုပ်ပန် မျက်မှောက်ဘ၀တွင်လည်း မုစ်လင်မ်...See More
ဗုဒ္ဓဘာသာကို နာဇီလက်သစ်ဆိုပြီး နာမည်ဖျက်တဲ့ မိုးသီးဇွန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူ့သဘောထား စစ်တမ်းကောက်ခြင်း
(ကိုမိုးသီးဇွန်ကို အမြင်မှန်ရအောင် ကူညီခြင်း)
(တစ်နာရီအတွင်းမှာ မိုးသီးဇွန်ကို မုန်းကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်သူ ...See More
Aung Than Tun, နန္ဒ ထွန်း, Win Naung Oo and 30 others like this.
Ks Lwin ဒီချီးထုတ်က ဘယ်တုန်းကမှ ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ကောင် ဒီကောင်အကြောင်းလာတင်နေသေးတယ် ထွီ....
(အမည်ပုန်းအမည်ဝှက်) မောင်ချိန်ခွင် နှင့် ၀ိုင်းတော်သားများကြည်ညိုသဒ္ဒါပွါးနိုင်ရန်
၃း၁၂ ။ ( အိုနဗီတမန်တော် )အသင်သည် (ယင်း) မယုံမကြည်သွေဖည်ငြင်းပယ်ကြကုန်သော ကာဖိရ်တို့ကို ပြောကြားပါလေ။ “ မကြာမီအတွင်း အသင်တို့သည် (ဤပစ္စုပ်ပန် မျက်မှောက်ဘ၀တွင်လည်း မုစ်လင်မ်တို့၏) နိုင်နင်းလွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံကြရကုန်အံ့ ။ ၄င်းပြင် ( နောင်တမလွန်ဘ၀တွင်လည်း) ‘ ဂျဟန္နမ်’ ...See More
နန္ဒ ထွန်း, Mg Mg Tin and 24 others like this.
Kyaw Kyaw Naing သူတို့ကျမ်းစာကလူတွေရေးထားတဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်လို့ပြင်ချင်တိုင်းပြင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကုလားတွေရှိသေးတယ် ထပ်ပြီးဆုံးမလိုက်ပါဦးအကို
Yesterday at 4:07pm via mobile · Like · 3
Chit Chit Lay အေးလေလူရေးထားတာမှမဟုတ်တာ လူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ကရေးထားတာလေ ဘယ်ပြင်လို့ရမလဲ။
Yesterday at 4:30pm · Like · 3
Maung Nauktoe အဲဒါ အင်တာနက်။
Yon Mi myanmar နိုင်ငံမှာ အလည်ဆုံးသည် ကွန်နက်ရှင်
린린 ဒိုင်နမို တပ်ပေးလိုက်ကိုနေ EPC က မီးကိုစောင့်စရာမလိုတော့ဘူး ကိုယ်ပိုင်မီးစက်ဖြစ်ရော
ငါအမြန်ပြန်လာမယ် - မနက်ဖန်တော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းနွှဲထားကြ
အဂတိလိုက်တဲ့ ရဲတွေ ၊ ၀န်ထမ်းတွေ အကုန်တရားစွဲမယ်ဟေ့
လယ်သမားများ ခြံကွက်ရိုက်ရာ နေရာသို့ လုံခြုံရေးအင်အား ၅၀ခန့်ဖြင့် ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီမန်နေဂျာ ဦးမြင့်ဇော် ရောက်ရှိလာပြီး လယ်သမားများနှင့် အခြေအတင်ပြောဆိုကြရာ ဇေကမ္ဘာမန်နေဂျာ ဦးမြင့်ဇော်မှ`ဘာဖြစ်လို့ခတ်တာလည်း။ မြေကွက်လိုချင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်ဘူး။ သက်ဆိုင်ရာဌာနကို သွားပြော´ဟုဆိုသဖြင့် လယ်သမားမျ...See More
Aung Than Tun, Lin Naingmyint, ကို ကံ ကြီး and 37 others like this.
Na Wa Day မတရားမလုပ်ကြနဲ့ဟေ့။
Yesterday at 4:47pm via mobile · Like · 1
Ko Hnin Mg ခရိုနီ အကျင့်တွေ ပြောင်းချင်းပုံ
Nay Wai ကိုရင် မောင်မို့ပြောတတ်တယ် ၀န်ကြီးချုပ် နဲ့ သမ္မတ အဆင့်ကတောင် အဲလိုမပြောဘူး ကျုပ်ကို ရှင်းလား (((Ko Yinmaung · Friends with Mi Mi Khaing and3others
နေမျိုးဝေလုပ်ပေးလို့ ဘာအောင်မြင်မှုရတာရှိလဲ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ကျည်အတုတွေနဲ့စစ်တိုက်နေတာပါ နှစ်ဖက်အပေးအယူလုပ်ထားပြီးသားပါ)))
Nay Wai ရင်မောင် ကို ဘလော့ရန် ဖတ်စ်ဝမ်နင် လိမ်လိမ်မာမာနေပါ
Nay Wai shared Naung Taw Lay's photo.
လယ်သမားများ ခြံကွက်ရိုက်ရာ နေရာသို့ လုံခြုံရေးအင်အား ၅၀ခန့်ဖြင့် ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီမန်နေဂျာ ဦးမြင့်ဇော် ရောက်ရှိလာပြီး လယ်သမားများနှင့် အခြေအတင်ပြောဆိုကြရာ ဇေကမ္ဘာမန်နေဂျာ ဦးမြင့်ဇော်မှ`ဘာဖြစ်လို့ခတ်တာလည်း။ မြေကွက်လိုချင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်ဘူး...See More
Aung Than Tun and3others like this.
Lin Yaung မြန်မာပြည်ကိုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အကောင်တွေလူမဟုတ်ဘူး..၀က်တိရာစ္ဆာန်တွေ..ဒါကြောင့်လူစိတ်မရှိလို့ပြည်သူကိုမသနားတာ...သူတို့ကိုယ်မှာအာဏာသရဲ့ဝင်ကပ်နေကြတာ...ဘယ်နည်းနဲ့ပဲရပါစေ..အုပ်ချုပ်မှာ..လာမည့်၂၀၁၅ခုမှာလည်း..သူတိုအာဏာရအောင်ယူမယ်..တနည်းနည်းနဲ့ ..ကြည့်ထားကြ...See More
Nay Wai လင်းရောင် အဲလိုသတ်မယ်ဆိုရင် ကျနော့်ကို ဘလော့သွားပါ ။ ကျနော်က ကာကွယ်ပေးမှာ အဲလိုမဖြစ်စေရပါဘူး ။
win0123@gmail.com,ms.hsumyathmwe@gmail.com,whitemossess@gmail.com,htinzawaung777@gmail.com,kokozawempire@gmail.com,aunghlaingoo999@gmail.com,northstar1991@gmail.com,lumitekhalay@gmail,dathageye199@gmail.com,aungthantun7@gmail.com,aungthantun7@gmail.com,tzk88@gmail.com ,soemin1962@gmail.com ,Kyawzinmoe@hotmail.com,akoaung09@gmail.com,bro hanngyi88@gmail.com,ksdmmdsk@gmail.com,yeaungminmyat@gmail.com,shwethway07@gmail.com,
L-Zaw Sai, Aung Than Tun, နန္ဒ ထွန်း and 14 others like this.
Min Lay ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရေ
Yesterday at 6:27pm via mobile · Like
Xcode Thug poisonlay23@gmail.com ကိုလဲ ပို.ပေးပါအုံး အကို
Min ThuRa Kyaw sacoinlay@gmail.com ,pls!
Wai Phyoe demoonphyoe@gmail.com
လူမြင်ကွင်းမှာ ဖွင့်ချပါ အယူအဆ မှန်ရင် တင်ကျန်မယ်
Nyi Nyi Mg, Mg Mg Tin and 22 others like this.
Naung Taw Layposted toNay Wai
ဆင်ဖုံကျေးရွာ နှင့်သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ ပေါက်တလောက်ကျေးရွာများမှ လယ်သမား ၅ ဦး (ဦးစံဝင်းမြင့် - ဦးမြင့်သိန်း - ဦးသောင်းလွင်-ဦးနိုင်ဝင်း - ကိုဇော်ကြီး) တို့အား ဇေကမ္ဘာ မြင့်ဇော် မှ တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှုအား မင်္ဂလာဒုံ ရဲစခန်းမှ အမှုမြောက်ကြောင်းဖြင့် ပြနလည်ပြောဆိုကာ ရဲစခန်းကိုမနက်ဖန် ထပ်ခေါ်သည်ဟုသိရသည်။ မြေဧကများစွာ ပိုမို သိမ်းဆည်းထားသည်ကိုရဲစခန်း အနေဖြင့်လည်း သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ စွဲဆိုခံထားရသူ လယ်သ...See More
ဘာသာရေး လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဘာသာပေါင်းစုံနေကြ အေးဆေးပဲ
လူမျိုးရေးလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး နိုင်ငံသားစံတွေနဲ့ နေကြအေးဆေးပဲ
သူတစ်ပါး ဘာသာကို သတ်မယ်ဖြတ်မယ် သတ်ဖို့ ဖြတ်ဖို့ ပြာထားဟောထားတာလေးတွေလောက်ကိုပယ်ခိုင်းနေတာ
ငါ နေမျိုးဝေ ဖြစ်တယ်
L-Zaw Sai, Aung Than Tun, နန္ဒ ထွန်း and 25 others like this.
အသဲမရှိ သူ ထောက်ခံတယ်
Htoo Wai သဘောကျတယ်ဗျာ .... ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အစ်ကိုဘယ်ရောက်နေတာလဲ.....မဲမပေးလိုက်ရလို့ပါ.... see you 2015.
Yesterday at 2:14pm · Like · 1
Nay Wai shared လူထု မောင်ကာဠု's photo.
၈း၆၅ ။ အိုနဗီတမန်တော် ၊ အသင်သည် “မုအ်မင်မန်” သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အား စစ်မက်ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ခြင်းငှာ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါလေ ။ အကယ်၍ အသင်တို့အနက် စွဲမြဲကြံ့ခိုင်စွာ(တိုက်ခိုက်မည့်) သူ နှစ်ဆယ်ရှိကြပါမူ ၄င်းတို့သည် ( ကာဖိရ်တို့ဘက်မှလူ) နှစ...See More
၉၆၉စတေကာဝေတဲ့မျိုးချစ်လူငယ်တွေကို အုပ်စုဖွဲ့ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ ကုလား များကို ဖမ်းမိ
မင်းလားကွ ၉၆၉ ဝေတဲ့ကောင်ဆိုပြီး အောင်ဇေယျကြိုးတံတားနားမှာ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ကောင် ကို ရဲကဖမ်းနေစဉ်ဓာတ်ပုံပါ
ထို့မူဆလင်အဖွဲ့သည် ၁၀ယေ...See More
35Like · · Share
Lin Yaung ကေ...ကုလားနဲ့အတူနေမယ်ကောင်တွေမြင်ပီလား...မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအတူတူနေမှာလား...ကုလားတွေနဲ့ ပဲ..ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဗလီအတူ..ရောနှောနေမှာလား....တရက်ကို..5..ခါအသံကျယ်လောင်အော်ဟစ်ပြီး..နေတဲ့ကုလားနဲ့ ဆူဆူညံညံနေကြမှာလား...မြန်မာတွေကို...မူဆလင်ကုလားတွေအမြဲတမ်းဓားနဲ့ ထိုး..သတ်ကြ..မုဒီးကျင့်ကြ...အနိုင်ကျင်တာကောင်းတယ်များများလုပ်ကြပါ....
Yesterday at 12:21pm · Like · 1
Min Sanီကျနော်တို့ဗမာတွေ အခုနားလည်လာပါပြီ၊အရင်တုန်းက စစ်ဖိနပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုကြောင့်အမျိုးဘာသာကိုကာကွယ်ဖို့နေနေသာသာ ကိုယ့်အသက်ကိုတောင် ဘယ်လိုထုပ်ရမှန်းမသိခဲ့တာမို့ပါ။
နန္ဒ ထွန်း and7others like this.
Nay Wai shared Aung Myo Oo's photo.
မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးနေမျိုးဝေ နှင့် အမှုဆောင် ဦးနေလင်းထွန်း ဒေါ်အေးအေးမိုး သုံးဦး ကလေးမှာခရီးလွန်နေ ပြန်ရန်ခက်နေ ။
လယ်မြေမှုခင်းများဆက်လက်ဖော် ထုတ် နေ ။
ဒုဥက္ကဌ ဒေါ်စန္ဒာဦး နှင့်အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးဦး နေပြည်တော် မှာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ နှင့် တွေ့ဆုံနေ
လှည်းကူးမြို့နယ်မှ အမှုဆောင် ဦးအေးထွန်း စုံစမ်းရေးကော်မရှင် နှင့်တွေ့ နေ
ဦးခွန်ထွန်းဦး ဂင် ကမ်လျန် ဦးဇမ်ဇမုန်
Win Naung Oo and6others like this.
Nay Wai ဦးနေမျိုးဝေ ပုံက မပါဘူး ဒါကနေပြည်တော်ကပုံ ဦးနေမျိုးဝေက ကလေးမှာ
ဘိုးဘိုး ကြီး ဟုတ်ကဲ့
Nay Wai ဘိုးဘိုးကြီးထက် ကြီးသွားပြီ ဟုတ်ကဲ့တဲ့ ဆင်ထက်ကြီးသွားပီ
ဘိုးဘိုး ကြီး ဟားဟား
Lu Bo and5others like this.
ဒုဥက္ကဌ ဒေါ်စန္ဒာဦး နှင့်အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးဦး နေပြည်တော် မှာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်ရှင် ဥက္ကဌ နှင့် တွေ့ဆုံနေ
Yan Gon likes this.
Posted by Wai Lin Aung at 3:26 AM
နွား နှင့် လွှတ်တော်အမတ်
ချက်ကောင်းကို ကိုင်ပါမှ နွား၏သဘာဝ နွားတို့သည် စားကျက်မြေတွင် နေရာအနှံ သွားလာ စားသောက်ခွင့်ရှိ၏။ စားကျက်တွင်ရှိသော မြက်နုနု ချိုချိ...
စိုက်ပျိုး ရေး ၀န်ကြီး တနပ်စား မြင့်လှိုင် ၏ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်
မြင့်ဇေယျာ ကုမ္မဏီ မြင့်ဇေယျာကုမ္မဏီ မျက်နှာစာ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် သီးစားချ ထားသောလယ်များ ယခင် စစ်ပင် ကျေးရွာ မြင့်ဇေယျ...
မြန်မာသံတော်ဆင့်: စာရေးဆရာကျော်ဝင်း သို့ ပြန်လှန်ေ...
ကိုးဒီသွေး: ဦးခင်ညွန့်၊ ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲ၊ ကိုမြင်...
ပဲခူးတိုင်း ထောက်ပို့ တပ် ၏ မတရားလုပ်ရပ်
နာကျင်ဖွယ်ပြစ်ဒဏ် ကို ခံရရှာသည့်ရဟန်းတော်
Ko Oo + Ma Thandar: “ကိုစံရှင် နှင့် ကိုယ့်သေတွင်း...
Ko Oo + Ma Thandar: ကျနော် မမေ့တဲ့ လေထီးဗိုလ်အုန်း...
၁၉၆၂ခု ဇူလိုင် ၇ ရက် ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံ ကိုယ်ေ...
မလက်တိုအရေး အကျိုးဆောင်တဲ့ ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို ဧရာဝတ...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan ...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Luu Y...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Wayyan (Tau...
(ဦးစံဝင်းမြင့် - ဦးမြင့်သိန်း - ဦးသောင်းလွင်-ဦ...